Community_XH_Uluntu | PIVX
Uluntu lubaluleke kakhulu kwiqela kwi-PIVX kuba apho sakha khona isiseko solawulo lwethu. Ukuba unemibuzo kumalungu e-PIVX okanye ngabaphuhlisi senze kube lula ukuba ubenxibelelana nabo. Zive ukhululekile ukujoyina naziphi na iziteshi ezidweliswe ngezantsi ngokuchofoza uphawu lwakho olukhethiweyo.
I-PIVX Ngaba Uluntu Wonke umntu
Yaye wonke umntu uyamkelwa. Sikholwa kwimfihlo, kodwa sikholelwa inkululeko yokuthetha. Uluntu luyindawo yokuba wonke umntu abe nokucacisa, kodwa sicela ukuba ubonise ukuxubusha kubo bonke amalungu asekuhlaleni.
I-PIVX yiprojekti yoluntu evulelekileyo yomthombo onokuqhubela phambili kwimigudu yokuqokelela. Ukususela kwiziphakamiso ezintsha, ekuphuhliseni nasekulawuleni uluntu, ukuthatha inxaxheba kuwo wonke umntu kubaluleke kakhulu.
Sivota kuyo yonke into. Ukususela kwiziphakamiso zohlahlo lwabiwo-mali ngamasternodes ekuphuhlisweni kwexesha elizayo ukuvota koluntu kwi-Slack kwi-brand kunye noqhagamshelwano. Ivoti zomphakathi kwisikhokelo seprojekthi zikhuthazwa
Asinayo iMigaqo yoLuntu, Sinakho izikhokelo. Nabani na onako Ukujoyina.
Nabani na onokuthatha inxaxheba. Sivotelele Ezi Zikhokelo Zokukhokela Iphulo leProjekthi.
Le projekthi i malunga nePIVX. Siyakhuthaza ingxoxo malunga nezinye izixhobo zokufunda, ezinye ubuchwepheshe kunye nezinye izinto ezintsha, kodwa nceda ukhuphe ukuthengisa okanye ukuhlaziya ezinye iiprojekthi kwisiteshi se-PIVX.
Ubumfihlo bubaluleke kakhulu kuluntu. Kucelwa uphephe nayiphi na isenzo esiza kutyhila ulwazi oluthile okanye ubuni nawuphi na uluntu ukuba alukho yoluntu.
Musa ukuTroll okanye Ukuxhasa ukuTrolling
Musa ukuxhamla okanye uhlasele nabani na ukuba aphendule impendulo. Musa ukuhlasela umntu, ungabizi-ubizo kwaye ungasongeli.
Gcina i-NSFW ngaphandle kweziteshi zikawonkewonke
I-PIVX yiprojekthi kumntu wonke. Amanye amalungu eqela aneminyaka engaphantsi kweshumi elinesibhozo, kwaye amanye amalungu ekomiti ayithandi ukubonakala kwi-NSFW. Ukuba ufuna ukwabelana ngomxholo omdala, nceda uhlanganyele kwiivenkile ezizimeleyo okanye ngoqhagamshelwano lobuqu.
Sineengcamango ezintle ezahlukileyo. Masigcine ingxoxo-yezopolitiko. Umsebenzi ongekho mthethweni / ovumelekileyo awunakupheliswa
I-PIVX iyimfihlo kwaye ingaziwa iteknoloji ebalulekileyo.
Ingxoxo nayiphi na imisebenzi engekho mthethweni, okanye ukuziphatha okungekho mthethweni akuyi kunyamezela. Naluphi na ingxoxo kwisicelo kufuneka ihambelane ngokuthe ngqo kwi-teknoloji, kwaye ingasebenzisi.
Sombulula ukungavumelani ngokuhlonela
Sonke sinemibono eyahlukileyo kwinqanaba. Umbono wonke umntu usebenza. Asivumelani, kodwa yinto enhle. Ulwahlulo lwengqondo luya kuqhuba impumelelo. Ukuba awuvumelani, hlonipha wonke umntu, kwaye masisombulule imiba yokuqhubela phambili iphrojekthi.